WAR ILEEN TANOO KALE: Laacib xalay garoonka looga saaray QEYLADA Taageerayaasha dartood – Gool FM
WAR ILEEN TANOO KALE: Laacib xalay garoonka looga saaray QEYLADA Taageerayaasha dartood
Byare September 27, 2017
(Istanbul) 27 Sebt 2017. Weeraryahanka naadiga RB Leipzig ee dalka Jarmalka Timo Werner ayaa xalay Dhacdo Yaab leh ka dhigay tartanka Champions League oo aan horey looga arag.
Dhaliyaha reer Jarmal ayaa dalbaday in garoonka laga saaro daqiiqadii 32-aad kaddib markii uu sheegay inuu ku wareeray oo uu u adkeysan waayay qeylada taageerayaasha reer Turki ee kooxda Besiktas oo ciyaarta kaga adkaaday 2-0.
21-jirka ayaa xitaa isku dayay inuu ku ciyaaro qalab dhagaha loo galiyay si uu buuqa uga hor istaago kaddib markii marar badan la arkay isagoo gacmaha dhagaha saaranaya.
“Weligeey Nolosheyda ma arag jawi sidan oo kale ah. Waan awoodi waayay inaan diiradda saaro ciyaarta,” Timo Werner ayaa sidaa yiri mar uu ka sheekeynayay taageerayaasha qeylada badan ee naadiga Besiktas.
“Waxaan dalbaday wax dhagaha la gishto balse iyaga xitaa way I caawin waayeen. Ilaa iminka si fiican ma dareemayo.”.
Aqriste sheekadan oo kale waligaa ma maqashay intaad ciyaaraha ku dhex jirtay???.
Chelsea oo Hazard ka dhigeysa laacibka ugu mushaarka badan Premier League…(Aqriso 10-ka sare ee horyaalka Ingiriiska)
Conte oo caawa la kulmaya Costa markii ugu horreysay tan iyo Fariintii uu u diray